Imise ayay kooxda Manchester United mushahar ahaan u siin doontaa isbuucii Marcus Rashford? – Gool FM
(Manchester) 16 Juunyo 2019. Kooxda kubadda cagta Manchester United ayaa la soo warinayaa inay aqbashay inay Marcus Rashford hordhigto dalab heshiis kordhin ah oo uu isbuuciiba ku qaadanayo mushahar dhan 350,000 oo gini.
Xiddiga xulka qaranka England ayaa galay 12-kiisii bilood ee ugu dambeeyey qandaraaskiisa, Red Devils ayaana haatan hordhigtay dalab cusub.
Rashford ayaa ahaa dooqa koowaad ee weerarka macallin Ole Gunnar Solskjaer qeybtii labaad ee xilli ciyaareedkii la soo dhaafay, laakiin waxa uu illaa iyo hadda ka soo horjeeday inuu qalinka warqadda duldhigo.
Sida uu warinayo Wargeyska The Sun, xiddigan ka soo baxay akadeemiga ayaa xiiseynaya inuu sii joogo, laakiin wuxuu kubbad adag la ciyaari doonaa guddoomiye ku xigeenka fulinta kooxda Ed Woodward si uu u ogaado inuu kordhin karo mushaharkiisa.
Waxyaabaha ka carreysiiyey Rashford oo uu u dalbanayo mushaar kordhin ayaa waxaa qeyb ka ah in weeraryahanka Faloobka ah ee Alexis Sanchez uu isbuuciiba mushahar ahaan uga qaato Man United 505,000 oo gini tan iyo markii uu kaga soo biiray Arsenal bishii Janaayo ee sanadkan 2019.
Ilo wareedo ayuu Wargeysku ka soo xigtay iyagoo dhahaya: “Marcus waa Man United, waa uu dhexmarayaa oo uu dhexmarayaa mana doonayo inuu tago.”
“Waxa uu ku faraxsan yahay inuu ka hoos ciyaaro macallin Ole, waxaana uu door bidayaa inuu noqdo weeraryahanka ugu weyn, laakiin haddii Sanchez uu heli karo mushaar dhan 505,000 oo gini todobaadkii, markaas Marcus wuu ogyahay inay lacag halkaas taallo.”
Kooxaha Real Madrid iyo Barcelona ayaa labaduba la warinayaa inay xiiseynayeen saxiixa Rashford sanadihii la soo dhaafay.